Somali Landing Page - Prior Lake Savage Area Schools
Iyada oo la isku dayeyo in si wanaagsan loogu adeego qoysaska ku hadla Afka-Soomaaliga, Iskuullada Deegaanka-Lake-Savage Area (PLSAS) ayaan hore u soo saaray qaybtan afsoomaali ah macluumaadka ay inta badan adeegsadaan qoysaskeenna.
Sababo la xiriira cusbooneysiinta joogtada ah, maahan in shabakadeenna oo dhan la tarjumay, sidaa darteed waxaan ku darney Turjumida Google (Translate) bogga ugu sareeya ee dhammaan bogagga websaydkeenna. Si aad u adeegsato, riix "Languages," riix qulqulka Turjimaad Google, ka dibna xulo luuqadda aad doorbiday ama aad rabto.
Haddii aad jeclaan lahayd inaan mowduuc ku darno boggan, ama haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir input@priorlake-savage.k12.mn.us
Macluumaadka Ardayda iyo Aaladda Internetka
Adeegyada Nafaqada ee Ilmaha
Adeegyada Caafimaadka Ardayda
Isqorista waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ama booqashada Xarunta Adeegyada Degmooyinka. Hubi bogga isdiiwaangelinta saacadaha hadda socda.
Haddii aadan awoodin inaad gasho internetka ama kombiyuutarka, fadlan booqo Xarunta Adeegyada Degmada ee ku taal 4540 Tower St. SE, Prior Lake, halkaas oo aan kaa caawin doono inaad iska diiwaangeliso khadka tooska ah adoo adeegsanaya kombiyuutar ku yaal hoolkayaga. La xiriir Sheryl Haugen wixii su'aalo ah ama haddii aad u baahan tahay turjubaan: (952) 226-0000 ama shaugen@priorlake-savage.k12.mn.us.
Fadlan soo qaad ama u diyaari diiwaanka talaalka ugu dambeeyay cunugaaga inuu diyaar u noqdo, oo ay weheliso shahaadada dhalashada ama baasaboor. Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan degmada, waa inaad buuxisaa Foom Diiwaangelin Furan ka hor intaadan ilmahaaga qorin.
* Diiwaangelinta laguma sameyn karo taleefanka gacanta. Diiwaangelinta waa in lagu sameeyaa kumbuyuutar iyadoo la adeegsanayo Chrome, Firefox, Safari 9.0 ama mid cusub, ama Internet Explorer 11 ama ka cusub. Hubso inaad nala socodsiiso wixii ku soo kordha.
PLSAS waxay u fidisaa galaangal sugan waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah si ay dib ugu eegaan macluumaadka ardayga ee muhiimka ah sida: meeleynta, jadwalka fasalka, buundooyinka, xaadiritaanka, macluumaadka ardayda, cuntooyinka qadada iyo lacag bixinta, jadwalka joogsiga baska iyo waxyaabo kale.
Xariirka waalidka ayaa ka kooban xiriiriyeyaal aaladahaan internetka. Waad gali kartaa xariirka waalidka adigoo gujinaya “Parents” qeybta sare ee websaydka.
Qaybta Suuqa Qudaanka ee Adeegyada Nafaqada ee Ilmaha ayaa siisa ardayda si ku-dheelitirnaan leh, ikhtiyaarro nafaqo leh oo kobciya koritaanka jirka iyo maskaxda. Qiimaha quraacda iyo qadada xilligan ayaa laga heli karaa bogga Adeegyada Nafaqada ee Ilmaha.
Si aad lacag uga bixiso internetka, koonto ka sameyso SchoolCafé. Ka dib markii koontadaada la sameeyo waxaad hubin kartaa dheelitirka koontada ilmahaaga oo aad arki kartaa waxay iibsanayaan. Waalidiintu waxay kaloo dejiyeen digniino otomaatig ah iyo lacag-bixinno otomaatig ah, daawashada nafaqada iyo macluumaadka xasaasiyadda iyo inay dalbadaan cunto bilaash ah iyo qiimo jaban.
Waxaan kaloo aqbalnaa lacag ama jeegag. Fadlan raac lacagta ama eeg tilmaamaha lacag bixinta ee ku taxan bogga Adeegyada Nafaqada Ilmaha.
Cunto bilaash ah iyo qiimo jaban
Qoysasku waxay xaq u yeelan karaan cuntada iskuulka ee bilaashka ah ama qiimaha jaban. Qoysasku waa inay buuxiyaan arji sanad walba. Codsiyada waxaa laga heli karaa SchoolCafé ama shabakadda boggayaga (internetka).
Halkan guji si aad u dalbato cunto bilaash ah ama qiimo jaban
Shaqaalaha adeegyada caafimaadka ee iskuul walba wuxuu lashaqeeyaa ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha si kor loogu qaado caafimaadka ardayda iyada oo loo marayo howlaha soo socda:
Lasoco diiwaanada talaalka ardayda
Maareeya qorshayaasha caafimaad ee ardayda leh dhibaatooyinka caafimaad
Bixinta gargaarka degdega ah iyo daryeelka degdega ah ardayda iyo shaqaalaha
Bixi daryeel caafimaad iyo nidaamyo
Caawinta waxa ku jira cudurro la is qaadsiiyo
Waxaad ka heli kartaa macluumaadka goobta joogsiga baska ilmahaagu ku yaal Xadka aan dhamaadka lahayn.
Gaadiidka basaska ee PLSAS waxaa bixiya Iskuulka Gawaarida Iskuulka ee Prior-Lake-Savage.
Wixii su'aalo ah ee la xiriira dhibaatooyinka habdhaqanka baska, fadlan la xiriir dugsiga ilmahaaga. Arimaha amniga ama jadwalka wadada, fadlan wac bixiyaha baska ee Iskuxirka Baska ee Prior Lake (952) 440-1166.
Kala xiriir Xafiiska Gaadiidka Degmada (952) 226-0050 si aad uga warbixiso isbeddelka cinwaanka, beddelka xannaano-maalmeedka, ama dhibaatooyinka shirkadda basku aysan kaa caawin karin.
Golaha waxbarashadu wuxuu ka kooban yahay toddobo muwaadin oo loo doorto inay matalaan bulshada dejinta hadafyada iyo siyaasadaha degmada, ku dhaqangelinta miisaaniyadda, ku dejinta canshuuraha, canshuuraha iyo arrimaha xirnaanshaha codbixinta, shaqaaleynta shaqaalaha iyo bixinta tasiilaadka lagama maarmaanka u ah waxbarashada ardayda.
Kala xiriir guddiga dugsiga
Kulamada guddiga dugsiga waxaa si toos ah looga daawan karaa kanaalka degelkeena ee YouTube iyo kanaalada marinka fiilada maxalliga ah ee 17 ee Prior Lake iyo Savage. Kulamada sidoo kale waa la duubay oo lagu dhajiyay boggayaga internetka maalinta ku xigta.
La soco kulamada guddiga
Waxaan waalidiinta ula xiriirnaa siyaabo kala duwan - emayl, wicitaano taleefan, fariimo qoraal ah, baraha bulshada iyo waxyaabo kale oo badan. Si loo hubiyo inaad heshay ogeysiisyo muhiim ah, fadlan tixgeli kuwa soo socda:
Cusboonaysiiso macluumaadkaaga xidhiidhka gudaha Kaamamka aan dhamaadka lahayn (Infinite Campus) adoo dhammaystiraya Cusboonaysiinta Sannadlaha ah, ama la xiriir dugsiga ilmahaaga haddii macluumaadkaagu isbeddelo inta lagu jiro sannad dugsiyeedka.
La xiriir miiska caawimaadda IT si aad ugu badasho luqadda aad doorbideyso af soomaaliga si aad u hesho xiriirrada tarjuman: https://www.priorlake-savage.k12.mn.us/parents/help-desk-form
Dooro inaad hesho farriimaha qoraalka adigoo ku soo diraya Yes illaa 67587
Hadaad jeceshahay nagala soco warbaahinta bulshada: